PressReader - Kwayedza: 2017-06-30 - Zvanotuma vatema kurwisa mabhunu
Zvanotuma vatema kurwisa mabhunu
Kwayedza - 2017-06-30 - Denhe Reruzivo - Munyaradzi Gunduza
Kushaiswa kodzero dzekutaura zvavanoda — Kuda naPeter pavanenge vari kuMbare vachinwa doro tinonzwa vachitsiurana kuti vasarambe vachitaura nyaya dzehudzvanyiriri hwemabhunu vachiti kwaive nemainformer ayo aibata vese vaitaura zvisirizvo maererano nehurumende yevachena.
Kubvunzwa zvitupa pese pese — tinoona kuti Kuda paanenge achienda kumusha kwavo kuChipinge ari muchitima munopinda mapurisa nemasoja achibvunza vanhu zvitupa. Kuda paanenge achibva kuMozambique nechikwata chaaitungamirira ave kuBocha tinoona achifamba nechitupa kuti apinde mupovho maigara vazhinji nekuti zvaisatenderwa kuti munhu afambe asina chitupa. Kuda anopinda mupovho aine chitupa panguva yaanosvika kuBuhera kuti vadyidzane nepovho.
Kusungwa zvisina tsarukano — vakomana vaive muchitima vachiratidza kuti vaienda kunopinda muhondo yeChimurenga vanosungwa nemapurisa nemasoja vave maRusape nekuti vaive vasina zvitupa. Pakarepo vanobva vasungwa ndokudzikwa navo maRusape imomo. Izvi zvimwe zvinhu zvinoita kuti Kuda pachake anyanye kuvenga vaRungu ndosaka tichizoona apindawo munyaya dzehondo kumberi. Munhu mutema aiti kana achinge asungwa haaipihwa mutongo pamberi pedare asi aibva atongotsakatika akadaro.